Websaydh Scene 360 joornaal ayaa soo saarta Cilmiga Sanadka 2008, waxayna si dhakhso leh u noqotaa mashruucii ugu guulaha badnaa iyada oo in kabadan 40 milyan oo booqasho. Websaydhka waxaa ka go'an inay soo bandhigaan hal abuurnimo cajiib ah xagga farshaxanka, nashqadeynta, iyo filimka. Laga soo bilaabo tattoos hyperrealist ilaa sawirrada muuqaalka xiisaha leh, xulashada dhejinta ayaa badanaa ka dhigi doonta akhristayaasha inay dhahaan "WOW!"
Sabti 8 Bisha Shanaad 2021
Sanduuqa Hadiyadda Sanduuqa hadiyadda ee Jack Daniel's Tennessee Whiskey ma ahan oo keliya sanduuq caadi ah oo ay ku jiraan dhalo gudaha ah. Dhismaha xirmo gaar ah ayaa loo sameeyay muuqaal qaabeed weyn laakiin sidoo kale dhalo badbaado leh isku mar. Thanks to daaqadaha furan ee weyn ee aan ku arki karno sanduuqa oo dhan. Iftiinka tooska ugu imanaya sanduuqa wuxuu iftiiminayaa midabkii asalka ahaa ee whiskey iyo daahir ahaanta sheyga. In kasta oo labada dhinac ee sanduuqa ay furan yihiin, adkaanta torsional waa mid aad u fiican. Sanduuqa hadiyadda waxaa gabi ahaanba laga sameeyay kaarboor waana matte buuxa oo lagu buuxsameeyaa shaambado kulul iyo waxyaabo wax dhuujiya.
Xabadka Sawir-Qaadeyaashu Labyrinth by ArteNemus waa laambad sawir qaade kaas oo muuqaalkiisa dhismeedka lagu adkeeyay waddada isku-xidhka, iyada oo lagu xasuusto waddooyinka magaalada. Fikradda cajiibka ah iyo farshaxameeyaha soo-jiidashada ayaa dhameystiraya dulucda dulucda. Midabada isbarbardhigaya ee maple iyo madow ebneer iyo sidoo kale farshaxanimada tayada sare leh ayaa hoosta ka xariiqaya muuqaalka gaarka ah ee Labyrinth.
Farshaxanka Muuqaalka Ah
Khamiis 6 Bisha Shanaad 2021
Farshaxanka Muuqaalka Ah Mashruucu waa taxane ah sawirada dhijitaalka ah ee loo yaqaan 'Scarlet Ibis' iyo jawigiisa dabiiciga ah, iyadoo si gaar ah xoogga loo saarayo midabka iyo muuqaalkeeda firfircoon ee sii xoogaysanaya sida shimbirtu u koraayo. Shaqadu waxay horumarisaa bey'adda dabiiciga ah ee isku dhafan waxyaabo dhab ah iyo mala awaal ah oo bixiya astaamo u gaar ah. Casaanka ibis waa shimbiro u dhashay Koonfurta Ameerika oo ku nool xeebaha iyo ciidaha waqooyiga Venezuela iyo midabka casaanka firfircoon wuxuu ka dhigayaa muuqaal muuqaal ah daawadayaasha. Naqshaddan ayaa ujeedadeedu tahay inay muujiso duullimaadka wanaagsan ee casaanka ibis iyo midabada firfircoon ee soonayaasha kuleylaha.
Arbaco 5 Bisha Shanaad 2021
Sumadda Maaddaama Wanlin Art Museum ay ku taallay dhismaha Jaamacadda Wuhan, hal-abuurnimadeena waxay u baahneyd inay ka turjunto astaamaha soo socda: Bar kulan dhexe oo loogu talagalay ardayda inay ku sharfayaan kuna qaddariyo farshaxanka, iyadoo lagu muujinayo astaamaha muuqaal farshaxan. Sidoo kale waa inay noqotaa sidii '' dadnimo ''. Maaddaama ardayda kulleejku istaagaan safka noloshooda, matxafkan farshaxanka wuxuu u dhaqmaa sidii cutub u furan ardayda mahadnaqa farshaxanka, oo farshaxanku la socon doono noloshooda oo dhan.
Talaado 4 Bisha Shanaad 2021
Sumadda Suuqa kale ee loo yaqaan 'Kalaido Mall' wuxuu bixiyaa goobo badan oo madadaalo ah, oo ay ku jiraan suuq laga dukaameysto, jid lugeynaya, iyo gagad diyaaradeed. Naqshaddan, naqshadeeyayaashu waxay isticmaaleen qaabab kale oo loo yaqaan 'kaleidoscope' ah, oo ay ku jiraan waxyaabo dabacsan, waxyaabo midabbo leh sida guntin ama dhagaxyo. Kaleidoscope waxaa laga soo qaatay Giriiggii hore beautiful (qurux, qurux) iyo εἶδος (wixii la arkaa). Sidaas awgeed, qaabab kala duwan ayaa ka tarjumaya adeegyo kala duwan. Foomku si joogto ah ayey isu beddelaan, taasoo muujineysa in Mall uu ku dadaalayo inuu la yaab iyo soo jiito booqdayaasha.
Websaydh Sanduuqa Hadiyadda Xabadka Sawir-Qaadeyaashu Farshaxanka Muuqaalka Ah Sumadda Sumadda